Izici zokuphepha ezihlakaniphile zokugcina imali yakho iphephile - BancaNEO
Izinkokhelo Zomhlaba Wonke
Ukubhenka njengesevisi (i-BaaS)
Uhlelo lwamalebuli amhlophe
Isofthiwe njenge-Service (SaaS)
I-API njengesevisi (AaaS)
Izici zokuphepha ezihlakaniphile zokugcina imali yakho iphephile
I-NEO isebenza neSatchel ilayisense ye-EMI yaseYurophu ekhishwe yiNational Bank yaseLithuania, eqinisekisa ukuthi izimali zakho zivikelekile ngaso sonke isikhathi.
Isoftware elwa nenkohliso nezinqubo zesistimu
Lezi ngezinye zezici ezibaluleke kakhulu zokuphepha esinazo endaweni. Isoftware, kanye nesethi yezinqubo ezikhethekile, isisiza ukuthi sithole futhi sivimbele noma yimuphi umsebenzi oyingozi ongalimaza imali yakho.
Ngokunika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili, sengeze isendlalelo esengeziwe sokuphepha enqubweni yakho yokuqinisekisa, okwenza kube inselele kakhulu kuzigebengu ze-inthanethi ukuthola izandla zazo kudatha yakho yomuntu siqu. Noma ngabe iphasiwedi yakho iba sengozini, akwanele ukuthi ungene kweyakho BancaNEO i-akhawunti.
Vula i-Akhawunti Eyimfihlo
Ngaphansi kwelayisense yethu, sinesibopho sokugcina imali yamakhasimende kwi-akhawunti eyehlukile neNational Bank yaseLithuania. Ngale ndlela siqeda noma yikuphi ukukhathazeka ohlangothini lwakho maqondana nokuphepha kwendawo yezimali.
Leli thuluzi lokuphepha elithuthukile liyasebenza njalo uma uthenga noma ukhokha ku-inthanethi, ukubheka kabili ukuthi ngabe nguwe ngakolunye uhlangothi kwesikrini. Kungenye nje isinyathelo sokuqinisekisa esivumela ukuthi siqinisekise ngokuphepha ukuthengiselana kwakho okuku-inthanethi.
Sibeke izinqubomgomo kanye nezilawuli eziqinisekisa ukuvikeleka okuphelele kwedatha yomsebenzisi ezinsongweni ezingase zibe khona ngokusebenzisa amandla okwabela abantu kwamanye amazwe. Njalo lapho uxhumana nathi ngezitolo zedijithali, noma wenza noma yiluphi uhlobo lokusebenza, ungaqiniseka ukuthi ifu liqaphe ukuphepha.
Vula I-akhawunti Yakho Eyimfihlo
Vula I-akhawunti Yebhizinisi Lakho
Kwa-Neo umgomo wethu uwukwandisa ukuphatha kwakho imali namathuba okuthenga
I-BaaS - SaaS - API
BancaNEO wuphawu lokuthengisa olubhalisiwe lwe-MY NEO GROUP TRUST
BancaNEO ngeSatchel uyilungu eliyinhloko leMasterCard Europe lokukhishwa kwamakhadi.
BancaNEO ngeSatchel isebenza ngaphansi kweSatchelpay UAB (reg Nr. 304628112) enikezwe ilayisense nguMnyango Wezinsizakalo Zokwengamela weCentral Bank yaseLithuania futhi yanikeza ilayisense yesikhungo semali kagesi uNr. 28, ngekhodi lomhlanganyeli wohlelo lokukhokha uNr. 30600, eqhuba ibhizinisi ngaphansi kwemithetho yeRiphabhlikhi yaseLithuania.
BancaNEO - Ixhaswe ngabakwaMY NEO GROUP TRUST
© 2022 - Wonke Amalungelo Agodliwe.